ZIMBABWE LC CONFIRMATION
ZIMBABWE LC ISSUING BANK CONFIRMING BANK CHARGES
ZIMBABWE LETTER OF CREDIT CONFIRMATION FEE
For Zimbabwe, when an exporter has concluded a commercial export contract with a Zimbabwean importer and the two parties do not know each other, the irrevocable and confirmed letter of credit is the most appropriate instrument to mitigate the risks.
The Zimbabwean importer will ask the Zimbabwean bank to issue a letter of credit for the benefit of the exporter who will have previously named the name of the notifying and confirming bank to be accepted by the exporter.
For Zimbabwe, the exporter must choose a confirming bank that has in its network of correspondents the Zimbabwean bank that is proposed by the importer but also the one that has an acceptable credit rating so that there is no default of payment from the confirming bank.
A letter of credit issued in Zimbabwe is usually confirmed by a big number of banks which are prepared to take the risks of Zimbabwean banks and make sure the beneficiary of the LC or exporter obtain his payment.
LIST OF ZIMBABWEAN BANKS ISSUING LETTERS OF CREDIT AND WHICH ARE ACCEPTED BY THE BANKS OF EXPORTERS
ZB Bank Limited of Zimbabwe
CONFIRMING BANKS FOR LETTER OF CREDIT ISSUED THROUGH ZIMBABWEAN BANKS
Banks which are confirm the letters of credit issued in Zimbabwe by Zimbabwean banks are: (please contact us to obtain the list or to be listed as confirming bank).
ZIMBABWE: CONFIRMATION FEE FOR LETTER OF CREDIT FROM A ZIMBABWEAN BANK
Confirmation charges and fees for letters of credit issued through Zimbabwean banks can be obtained on demand by emailing: info@tradefinance.africa.